Icala Lenkomba |
Uhlelo lwe-Germany Combination 500L brew
--- 500L microbrewery eJalimane. I-500l microbrewery ye-Firma Hausbrauerei Leidner ifakiwe futhi isebenza ekuqaleni konyaka we-2017. Kuyisipiliyoni esijabulisayo ngempela ukusebenzisana nokubambisana nomnikazi kaMnu Roland. Uchwepheshe kakhulu futhi unolwazi nge-cr ...
Uhlelo lweJalimane i-1000L Brewery
Ngiyajabula ukukuhlanganyela nezindaba ezinhle. Manje sinemakethe enhle eYurophu, nayi i-1000L yokuphisa utshwala. Lolu hlelo lweyunithi yokuphuza utshwala yindawo yokuphekela izitsha ezi-4 ene-3pcs 1000L ne-3pcs 2000L fermenter. Futhi senze ukwahlukanisa okuphindwe kabili ngokuya nge-t ...
Inhlanganisela yokuphisa utshwala yaseFrance 500L
Leli yikhasimende lethu laseFrance, indawo yokuphisa utshwala yiLabo du Brasseur futhi isethwe eFrance. Indawo yokuphisa i-500L isistimu yokuhlanganiswa nokushisa kwe-steam kanye nama-4sets we-fermenter kabhiya kanye nama-2sets wethangi likabhiya elikhanyayo. Ikhasimende ...
I-Canada 7BBL fermenter
Le fermenter ye-7BBL yayithunyelwa eCanada futhi yathola idumela eliphakeme kwiklayenti lethu. Umdwebo we-fermenter Ngaphambi kokulethwa, ikhasimende lithumele ingxenye yesithathu ukuhlola ...
ICanada 3.5BBL Brewery
Impendulo yekhasimende laseCanada
IBolivia 1000L Brewery
Leli ikhasimende lethu elihle eBolivia, sikhulume kaningi nesikhathi eside. Ekugcineni, baqinisekisa ukuthi yini abayidingayo ngemishini yokwenza utshwala. Futhi, ikhasimende langibonga ngokuba nesineke nokunaka iphrojekthi yakhe. Njengoba inkontileka okuvunyelwene ngayo ngenkontileka, thina sh ...
IBelgium 2000L ne-4000L yokuphisa utshwala
IBelgium 2000L nephrojekthi yokuphisa utshwala engama-4000L Manje sesikhiqiza iphrojekthi yokuphisa utshwala ka-2000L no-4000L yeklayenti lethu, leli klayenti esihlangane nalo embukisweni waseNuremberg ngo-2018. Okungezansi kukhiqizwa ubhiya manje: ...
IBelgium 1000L fermenter
Le ndawo yokuphisa utshwala isungulwe eBelgium, eyakhiwa ngo-2012. Futhi umnikazi weFranky ufuna ukukhulisa indawo yokuphisa ngo-2017. I-fermenter ingu-700L, futhi i-PVRV ne-PRV yizimpawu ze-KIESELMANN njengezidingo zamakhasimende. ...